Ny fitohizan-draharaha amin’ny sehatra mpitandro filaminana ho hitam-bahoaka dia mitohy hatrany izay nahitam-bokany tsara, indrindra ho an’Antananarivo. Ny toerana mangina sy ny faritra mena no anatanterahan’ireo miaramila ny fisafoana mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany, hoy hatrany ny fampitam-baovao avy ao amin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena. Raha ny jery todik’ireo minisitera misahana ny fandriampahalemana, nihena ireo asa ratsy nampivarahontsana tamin’ny fanombohan’ny fitondram-panjakana mijoro izao.
Anisan’ny nampitaraina ny olom-pirenena ny fanafihan-jiolahy an-tanàn-dehibe sy ny halatra omby miaro vono olona ataon’ireo dahalo any ambanivohitra, indrindra ny kidnapping. Tao anatin’ny atidoha sy mpanatanteraka ireny asa ratsy mahatsiravina ireny anefa ireo tandroka aron’ny vozona sy mpiambina ny vahoaka sy ny fananany ka tsy vitsy ireo mpitandro filaminana no voarohirohy. Tsy nisorona ireo andrimpanjakana voakasik’ireny tamin’ny fanadiovana ny tao anatiny. Miandrandra ny fitohizan’ny ezaka ny mpanara-baovao. Matahotra valifaty mantsy ireo mponina any ifotony raha sanatria miala tampoka any amin’ny toerana mivaivay ireo mpitandro filaminana nirahina nampandry tany na “opération”, indrindra amin’ny faritra nanjakazakan’ny dahalo.